Isticmaalida liinta qurubyada
"Maydhayaashu waxay xoojiyaan jirkeena dareenka ah, taageeraya dareenka guud ee farxadda, ladnaanta iyo xoojinta," ayaa lagu yiri Tai Yong Kim, oo ah actor caan ah oo ku hadasha afka iyo afhayeenka. Laakiin tani waa dhammaan erayada, markaa aan u leexanno cilmi-baaris caafimaad oo aan ogaano waxa uu liiska ku yiraahdo saynisyahanno.
First of dhan, miraha buunshanka casiir leh waxay ka caawiyaan ka hortagga horumarinta kansarka. Waxaa la cadeeyay in miraha liinta ay ka kooban tahay walxaha aan waxtar u lahayn ka hortagga, laakiin sidoo kale dib u dhigida horumarinta burooyinka. Gaar ahaan waxay waxtar u leeyihiin dagaalka lagaga hortago kansarka beerka, maqaarka, sambabada, naaska, caloosha iyo xiidmaha. Iyo, dabcan, qof kasta waa ogyahay in ay jiraan fitamiin badan oo ku yaal liinta - gaar ahaan fitamiin C , kaas oo difaacaya unugayada ka imaanaya saamaynta xagjirnimada lacag la'aanta ah. Maydhayaasha ayaa faa'iido u leh miisaanka, waxaa badanaa lagu daraa cuntooyin kala duwan oo ah ilaha maaddooyinka taageeraya xilliyada adag ee miisaanka.
Haddii aad si joogto ah u cabto casiir liin, waxaad si weyn u yareyn kartaa halista dhagxaan kellida. Laakiin way ka fiican tahay in la xadeeyo qiyaasta dhexdhexaad ah, sababtoo ah wax badan oo ka mid ah astaamaha acid ayaa dhaawici kara dhalada marka aad marar badan isticmaasho.
Guud ahaan, isticmaalka boomaatooyinka jidhku waa mid aan la garan karin, laakiin wax waliba waxay ku xiran tahay qiyaasta iyo isu-geynta sheygan.
Marka laga soo tago midabka midabada qorraxda nala yaqaan, waxaa jira nooc kale oo orange ah - casaan, ama "dhiig leh", sida loogu yeero wadamada Ingiriisiga ku hadla. Midabkani waxaa la siiyaa isaga oo leh maaddada sare ee anthocyanins - walxaha la dagaallama barar iyo infekshin. Isticmaalka suntan cas ee jidhka ayaa wax yar ka sarreeya kuwa caadiga ah, sababtoo ah waa noocyada "dhiigga" ee si dhab ah ula tacaalaya gabowga noolaha. Waxay sidoo kale ku jiraan fitamiin B9, taas oo ah walax asiidh . Fitamiinkan ayaa faa'iido u leh dumarka oo dhan, gaar ahaan kuwa qorsheynaya inay uuraystaan ​​ilmo mustaqbalka dhow.
Miraha leh vitamin C
Qiimaha Maalmeedka Vitamin C
Sidee si habboon u isticmaali kartaa malab, sidaa darteed waxay noqon doontaa mid faa'iido leh?
Imisa kaloori ayaa gubta hulauchup?
Cuntada yar yar - calaamado
Ranetki - wanaagsan iyo xun
Sidee lumisaa miisaanka kefir?
Champignons - wanaagsan oo xun
Roodhi cad - hanti siyaado ah
Faa'iidooyinka malab iyo qaababka bogsashada leh ee la yaab leh
Churchchel - wanaagsan iyo xun
Faa'iidooyinka basbaaska Bulgaariya
Sidee loo kariyaa lugaha digaagga foornada?
Caskets ka samaysan alwaax
Currant black - wanaagsan iyo xun
Cabbirta adhijirka ee Caucasian - dabeecadda
Georgina Rodriguez ayaa wiilka Cristiano Ronaldo kala kulmay dugsiga
Guryaha dibadda ee guryaha loogu talagalay
Sidee loo shubaa murqaha hoosta haweenka?
Ergonomics ee naqshadeynta
Naqshadeynta iyo jiidista dharka
Sababaha walaaca ee dhalinyarada casriga ah
Sidee looga boodaa dugsiga?
Riyadh-riyadu waa mid madax ah, muxuu riyadiisa ku riyoonayaa?
Frank Jessica Chestane wareysiga Al Pacino iyo jacaylka masraxa
Sidee looga takhalusi karaa jiirka guryaha gaarka loo leeyahay?